Iileta zemiqondiso: Owona magama afanelekileyo okwenza imiqondiso okanye iilebheli | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UNerea Morcillo | 18/10/2021 15:23 | Idizayini yeMifanekiso, ngokubanzi
Nanini na xa siphuma ngaphandle, sihlaselwa zizinto ezahlukeneyo ezinjengemibala, imifanekiso okanye nkqu oonobumba (iifonti). Xa sijonga iipowusta okanye imiqondiso yalo naluphi na uhlobo lokusekwa, siyaqonda ukuba uninzi lweefonti esineenxa zonke kuthi, ukanti asikaze sime sicinge malunga nokuba ngoobani kanye kanye kwaye ivela phi.
Ukuba ufuna ukufumana iimpendulo, kule posi asizukuqhubeka nokukwazisa kwihlabathi elimangalisayo lamagama, kodwa siza kuchaza nokuba yeyiphi eyona ndlela ilungileyo kuhlobo ngalunye lwelebheli kwaye kutheni uyilo lunento yokwenza yiyo.
1 Yintoni ileyibheli?
1.1 Sebenzisa kunye nemizekelo
2 Unxibelelwano olubonakalayo
2.1 Ke yintoni iilebheli?
3 Iindidi zodidi
3.1 Iifonti zamaRoma
3.2 Iifonti zesans serif (intonga eyomileyo)
3.3 Iifonti ezibhalwe ngesandla (akekeliswe)
3.4 Iifonti zokuhombisa okanye zoopopayi
Isihloko sichazwa njengombhalo ochazayo omelweyo kwilebheli ethile, uxwebhu okanye iposta ethile. Umsebenzi ophambili welebheli kukulumkisa nokwazisa malunga nesihloko esithile. Ekugqibeleni, iilebheli zinolwazi olunento yokwenza nento ekujongwe ukuba ibhalwe kuyo.
Iilebheli zihlala zizii protagonists kwiinkampani okanye kumacandelo omsebenzi, kuba ngabo abaphetheyo ekwenzeni yonke inkqubo yokuhamba kunye nokuya kwindawo leyo yile eyalela uhlobo lwelebheli, eya kuthi ibekwe kwiphakheji ngendlela ethile.
Ngale nkqubo, kuyenzeka, umzekelo, ukuba umamkeli kunye nomnini wepakeji bafumana into yabo ikwimeko efanelekileyo kwaye ngokuchanekileyo. Kwelinye icala, ilebheli ikwazalisekisa umsebenzi wokubonisa ukuba yeyiphi na into, kule meko sithatha njengomzekelo ileyibheli yefenitshala engekahlanganiswa, le lebhile iya kwazisa umsebenzisi ngendlela ekufanele ukuba ibe yiyo ndawonye.
Sebenzisa kunye nemizekelo
Le miyalezo ihlala ibekwa kwiindawo zentengiso ezibekwe ngaphandle, kodwa ngamanye amaxesha ziyafumaneka ngaphakathi kwaye zincedise uyilo lwazo kunye nokusekwa. Ukubekwa kwale miqondiso kuya kuxhomekeka kuhlobo lweshishini esinalo, umzekelo, ukuba ishishini lethu likwisitrato esihamba kancinci okanye sodwa, kungcono ukubeka uphawu oluncinci ekuqaleni kweso sitrato ukuze abasebenzisi bazi liphi ishishini lakho.
Olona phawu lwelebheli bubufutshane kunye noxinzelelo olulula ekufuneka umyalezo lowo uhanjisiweyo kufuneka uhambe ngalo, kuba umsebenzisi owabelana ngesithuba nelebheli kufuneka awuqonde umyalezo wawo kwanokuba unxibelelana nantoni na. Ukuba siyakuqonda ukubaluleka kweelebheli, sifika kwisigqibo sokuba le ndlela yokunxibelelana ngokubonakalayo iyinxalenye yobomi bethu bemihla ngemihla, kuba ikwasifumana kwaye isicebise.
Kukho iintlobo ezininzi zeelebheli: Uphawu lweNeon, iimpawu zokukhanyisa nge-LED, iimpawu zemoto enye, imiqondiso emacaleni amabini okanye imiqondiso enokukhanya okungangqalanga.
Okulandelayo, siya kushiya iinkcazo kwaye singene kwakhona, kwilizwe elimangalisayo loyilo ngaphandle kokuhamba kude nomxholo. Kwaye yeyiphi indima edlalwa kuyilo kwiilebheli kunye nokukhethwa kweefonti? Kwinqaku elilandelayo siza kukucacisela lona.
Umthombo: iNqanaba eliPhakamileyo
Sibiza ilebheli ngokuthatha iilebheli, kodwa sazi njani ukuba loluphi uhlobo lohlobo olulungeleyo okanye yeyiphi imibala efanelekileyo kwilebheli yethu? Inyani yile yokuba akukho potion yomlingo isixelela yona, kodwa sinokuzinceda ngokwethu ngegama labayili bemizobo "Iindlela zonxibelelwano" okanye mandithi "intengiso yedijithali".
Unxibelelwano olubonakalayo lunenjongo ephambili yokuhambisa imiyalezo ngezinto ezahlukeneyo ezinemifanekiso okanye iisimboli. Yintoni eyona nto yenza ukuba unxibelelwano lweengcamango lwenzeke. Ezi zimvo kufuneka zingene kumyalezo kwaye isiphelo kufuneka sibe kukuqonda okuchanekileyo phakathi komsebenzisi okanye umbukeli kunye nezinto ezibonakalayo (iifonti, imibala, imifanekiso). Apha ayisebenzi kuphela kukhetho loyilo lwethu kodwa nendlela abakwazi ngayo ukunxibelelana kamva.
Ngesi sizathu, ngalo lonke ixesha siyila umqondiso, ngaphambili besisenza isifundo apho sibeka khona inkampani yethu, Oko kukuthi, apha abaphulaphuli ekujoliswe kubo kunye namaxabiso abawabonayo bayadibana.
Ke yintoni iilebheli?
Inyani yile yokuba sikubiza ukuba kukulebhelisha umgca wemizobo womzobo, imijikelo yawo kunye noluhlu lokufaneleka kwayo apho isayikholoji yombala, ukhetho lwefonti kunye nemifanekiso yayo inxibelelana nayo.
Xa kufika ixesha lokwenza ukhetho lweefonti, sinenombolo engapheliyo yeefonti ezinokuhambelana ngokugqibeleleyo nenkampani yethu. Kule posi, siza kukubonisa ezona zilungelelaniswe kakuhle kwaye zibe nezona zifundekayo.
Iifonti zamaRoma zezi ziqukethe i-serifs okanye i-serifs, oko kukuthi, ezo zinto zincinci sizifumana esiphelweni sinye semivumbo.
Bahlala benesimilo esinzulu kwaye ngokwesiko kakhulu kuba ngokwembali yabo, yayizizinto ezidumileyo ezazenziwe ngesandla ngamatye. Zihlala zilungele iitekisi ezinde ukusukela, ngenxa yemilo yazo, kufezekile ukufunda ngokugqibeleleyo.
Ngesi sizathu, kwiilebheli ezininzi sihlala sifumana iifonti ezinje nge: Amaxesha UmRoma omtsha, Garamond okanye nabadumileyo Incwadi Antigua.
Iifonti zesans serif (intonga eyomileyo)
Ngokungafaniyo nohlobo lwamaRoma, olungelulo olwe-serif typefaces zezi zibonakaliswa kukungabikho kweziphelo okanye iitheminali kwaye imigca yazo ayibonisi umahluko. Ezi fonti zorhwebo kakhulu kuba zihlala kuninzi lweelebheli eziyilelweyo.
Kungenxa yokuba babonisa iziphumo ezifanelekileyo kwimixholo ephambili okanye kwisicatshulwa esincinci, oko kukuthi, kwiipowusta kunye nentengiso. Olu hlobo lwefonti lubonakaliswa njengoko luveza imeko yanamhlanje, ukhuseleko, ubundilele kunye nobuncinci.
Nangona olu hlobo lwefonti yokuchwetheza ingenawo umgca ongabonakaliyo ophunyezwa ziifonti zikaSerif kwimibhalo emide, ikwalungele isicatshulwa kwiscreen kunye neetekisi ezinobungakanani obuncinci. Ukusukela ukungabikho kweetheminali kunye neziphelo, kuyenza ifundeke ngakumbi kwizicatshulwa ezincinci.
Eminye imizekelo yeefonti zeSan Serif zezi: Futura, Helvetica, Arial, Gotham okanye Avenir.
Iifonti ezibhalwe ngesandla (akekeliswe)
Ndenza umhlathi omncinci ukukuxelela ukuba, ukuba awukayifundi iposti yethu ethetha ngolu hlobo lwefonti, ndincoma ukuba ungathandabuzi ukwenza oko kuba icacisa ngendlela ebanzi ngakumbi ukuba yintoni ebonakalisa isitayile.
Oko kwathethileyo, iifonti ezibhalwe ngesandla zikwabizwa ngokuba zi-italics okanye iscript. Olu hlobo lochwethezo lubonisa kwaye luxelise ikrafigraphy ebhalwe ngesandla, sesona sizathu siphambili sokuba banokuthiywa njenge Iifonti zecalligraphic.
Olu hlobo lwamagama lubonakaliswa ngokuqulatha italic okanye italic tendency. Oko kukuthi, oonobumba badityanisiwe kwaye siyabona ukuba ziqulathe iirveve ezibhengezwe ngakumbi kuneselfif okanye sans-serif typefaces.
Njengoko bavusa kwaye bemanyene ne-calligraphy, banobuntu obusondeleyo ngakumbi nobusondeleyo. Ezinye iifonti ze-italic zinokuba njalo Iskripthi se-Beckham okanye iParisiyne.
Iifonti zokuhombisa okanye zoopopayi
Bakwabizwa ngokuba iifonti zoopopayi. Zijongwa njengamagama amnandi, aqhelekileyo ngakumbi, kodwa anokuhambisa iintlobo ezahlukeneyo zeemvakalelo, ngenxa yento yazo yoyilo.
Banobuntu obomeleleyo kunye nobuntu. Ukusuka kwindawo yokujonga i-typographic psychology, ziifonti ezinomtsalane kwaye zinceda ekutsaleni ingqalelo ethe kratya. Oko kukuthi, uluhlu lokufundeka kwezi ntlobo zeefonti luncinci kakhulu.
Ngokuqinisekileyo ayizizo iifonti ezifanelekileyo zemihlathi yokubhaliweyo, njengoko zinokubonisa ukunqongophala kwenkathalo okanye ukungabi namdla kuyilo.
Njengoko sele sibonile, ukuyila ilebheli akwanelanga ukubhala le nto sifuna ukuyithetha, kodwa kufuneka sidlule kuthotho lweenkqubo ukuqinisekisa ukuba lo myalezo ufikelela kwisiphelo esiyimpumelelo kwaye, ke ngoko, ulungele yonke abasebenzisi.
Xa kufika ixesha lokuyila, singasebenzisa iifonti ezininzi, oko kukuthi, asifuni ukuba usebenzise kuphela ezo sikubonise zona, kodwa ukuphanda nasemva kwemizobo emininzi, unokufikelela kwisiphumo sokugqibela esichanekileyo. Xa usiya phesheya, into ebalulekileyo ngaphambi kokuba uyile umqondiso kukujonga kakuhle into eyenziwe ngabantu bonke phambi kwakho, sisitshixo sokufumana ulwazi oludingayo kwaye kwangaxeshanye ufumane inkuthazo kwimithombo wawungazi kwaphela.
Iimpawu ezininzi azinyanzelekanga ukuba ziyile ilogo yazo kodwa kuye kwafuneka ziyilungelelanise ngokweendawo zazo zentlonipho kunye namanyathelo ahambelanayo, kwindawo yangaphandle. Esi sithuba sisebenze ukubamba ingqalelo yabo bahlala bebona iivenkile okanye amaziko, nokuba luhlobo luni na: iihotele, iivenkile zempahla, iivenkile ezinkulu, njl.
Ngoku ukuba unenombolo engapheliyo yeelebhile ezikungqongileyo, ixesha elifanelekileyo lifikile lokuba uzivumele uhambe kwaye ngaphezu kwako konke ukhulule umyili oyiphethe ngaphakathi. Khumbula, phuma kwindawo yakho yokuthuthuzela, ubone ngeso lengqondo, uphefumlelwe, wenze uphando, wenze iindlela ezininzi zokuzoba kwaye uzibuze ukuba ingaba ichanekile kwaye izeziphi izibonelelo ezinokuyizisela abanye abantu ababonayo.
Ixesha lakho lifikile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Iileta zemiqondiso